ILothari yoMzantsi Afrika | I-SA Daily Lotto kunye ne PowerBall
I- Menyu engundoqo
UmNcedo kunye noLwazi
UwaKleyima njani Amabhaso
UwaKleyima phi Amabhaso
Fumana iziphumo zakutsha nje zeLothari yaseMzantsi Afrika zothotho lwemidlalo, kuquka i-Lotto, i-Daily Lotto kunye ne PowerBall, ku Lottery.co.za. Jonga amanani aphumeleleyo ukuze ubone ukuba unetikiti elinethamsanga, ufumane inkitha yolwazi ngazo zonke iilothari ezonwabisayo uMzantsi Afrika anazo.
Iziphumo ze-Daily Lotto - Mvulo, 16 Meyi 2022
yabaphumeleleyo kolu khuphiswano! Iziphumo ze-Daily Lotto
iintsuku.0 iiyure17 iimiz.17 zuzwana5
Uqikelelo olulandelayo kwe-jackpot:
Uqikelelo laNgokuhlwanje lwe-Jackpot ye-PowerBall
Ixesha elishiyekileyo lokudlala:
iintsuku.0 iiyure10 iimiz.17 zuzwana5
Yiba ngowokuqala ukubona iziphumo zakutsha nje zelothari. Ungajonga awona manani aphumeleleyo akutsha nje e- Lotto, i-PowerBall, i-Daily Lotto nangakumbi, emveni kwe-draw.
Iziphumo zakutsha nje
I-Daily Lotto ngumdlalo omtsha welothari yaseMzantsi Afrika, apho yonke imali yamabhaso ibhatalwa kwi-draw nganye!Ukuba akukho mntu unamanani amahlanu afanayo kwi-draw, imali yamabhaso idluliselwa kwisahlulo ezilandelayo kunokudityanisa kwelandelayo. Amatikiti axabisa nje i-R3 ukudlala kwaye ungajonga iziphumo ze- Daily Lotto mihla le ukusukela ngo 21:00.
Ulwazi oluthe xhaxhe
Sebenzisa ukujonga amanani okuzenzekelayo ukuze ubone ngokukhawulezileyo ukuba uliphumelele ibhaso lelothari:
Uncedo kunye noLwazi
Nokuba ufuna ukwazi ngazo zonke iindlela ezahlukeneyo zokudlala, abaphumeleli be-jackpot abakhulu okanye ukukleyima amabhaso, ungafunda konke ofuna ukukwazi ngemidlalo yelothari yoMzantsi Afrika apha.
Ulwazi oluthe xhaxhe ›
Ingcebiso ngokudlala iLothari
Khangela lengcebiso yokudlala ilothari – iyasebenziseka nokuba uligqala lalomdlalo okanye umtsha kwiilothari.
Ingcebiso ngokuDlala ›
Iziphumo zaNamhlanje ze-UK49's
Lunchtime: Mvulo, 16 Meyi 2022
Teatime: Mvulo, 16 Meyi 2022
Dlala kwi-intanethi ukuzinika ithuba lokuphumelela elona bhaso likhulu eMzantsi Afrika, okanye uthathe inxaxheba kwilothari kaZwelonke!
Dlala kwi-intanethi ›
Wenza Ntoni xa uPhumelele iLothari
Ungomnye wabanethamsanqa lukuphumelele kakhulu – kodwa yintoni elandelayo? Yazi ukuba kufuneka wenze ntoni emva kokuphumelela ilothari.
Wenza Ntoni xa Uphumelele ›
Ilungelo lokushicilela iMateriyeli © 2022 Lottery.co.za
I-About Us I-Contact Us I-Lottery Scams I-Disclaimer I-Sitemap
Umxholo kunye nokusebenza kwale webhusayithi khange kuvunywe okanye kuqinisekiswe -Ithuba Holdings RF Limited okanye iKomishini yeSizwe yeLothari yaseMzantsi Afrika.